Public Kura | » छाडा चौपाया व्यवस्थापन : नागरिक आवाज सुन्दैनन् स्थानीय सरकार छाडा चौपाया व्यवस्थापन : नागरिक आवाज सुन्दैनन् स्थानीय सरकार – Public Kura
Feature फोटो ग्यालरी
छाडा चौपाया व्यवस्थापन : नागरिक आवाज सुन्दैनन् स्थानीय सरकार
२० माघ २०७८
भैरहवा– अघिल्लो वर्ष बिहानको घामको झुल्कोसँगै हरेक दिनजसो भैरहवाका साहित्यकार तथा इतिहासकार विजय सागरले नगरपालिकालाई ‘उपहार’ भन्दै छाडा चौपायाको तस्बीर सामाजिक संजाल फेसबुकमा राख्थे । नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै नगरमा यत्रतत्र रहेका गाईगोरुको तस्बीर खिचेर उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत् उपहार दिइरहेका हुन्थे ।
नगरलाई ‘उपहार’ भन्दै उनले करिब साढे दुई महिना फेसबुकमा छाडा चौपायाका तस्बीर पोष्ट गरिरहे । पटक–पटक छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरेकाले आफूले सामाजिक संजालमार्फत् नगरपालिकालाई छाडा चौपाया (गाईगोरु, कुकुर) उपहारस्वरुप दिइरहेको उनको भनाई थियो । साहित्यिक नाम विजय सागर भए पनि उनको वास्तविक नाम भने विजय गोविन्द श्रेष्ठ हो ।
श्रेष्ठ तिनै व्यक्ति हुन्, जसले सिंगो नगरबासीको भावना बोलिरहेका थिए । यथार्थ बोल्ने भएकाले होला उनको हरेक शब्द यहाँका बासिन्दाले पछ्याउँछन् । उनका हरेक गतिविधि नगरबासीले हेरिरहेका हुन्छन् । नहेरोन् पनि कसरी, स्थानीय सरकार निदाएपछि श्रेष्ठले बोलिरहेका हुन्छन् नगरबासीको समस्या, दुःख र पीरमर्का । उनी नीतिगत र समस्या समाधान गर्ने हैसियतमा त छैनन् । तर सरकारलाई दवाव दिन्छन् । आवाज उठाउँछन् । थाक्दैनन् जबसम्म, तबसम्म जनगुनासो सुनिँदैन, माग पूरा हुँदैन ।
म्हिनौंसम्म एउटा सचेत नागरिकले नगरपालिकालाई घचघच्याई रहँदासमेत केही सुनुवाई भएन । तर, हाम्रो स्थानीय सरकार कति निकम्मा छ, दृष्य सिद्धार्थनगरले पस्ट्याउँछ । महिनौसम्म पनि नागरिकको गुनासो सुनेर समाधान गर्ने कोसिस गर्दैन स्थानीय सरकार । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मैले व्यक्तिगत लाभका लागि आबाज उठाएको थिएन । सिंगो नगरबासीको भावना बोलेको हुँ, हाम्रै नगर सुन्दर होस् भन्ने चाहेको छु ।’ नगर नसुनेझै गरेपछि उनले छाडा चौपायाको उपहार नगरलाई दिन छाडिसकेका छन् ।
शान्तिनगरस्थित गुल्मेली किराना पसलमा बिहीबार छाडा गाईले विक्रीका लागि राखेको पाउरोटी खायो । यस्ता समस्या नगरभरी छन् । छाडा चौपाया व्यवसथापन नहुँदा स्थानीयका बाली खाने, पसल पस्ने र नगरमा फोहोर हुने गरेको छ । संघ र प्रदेशका कुरा छाडौं । स्थानीय सरकार, जसले जनताको दैलोमै सेवा दिन्छन् भनिन्छ । यसैले त एउटा नारा छ– ‘सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा’ । तर नारामा भनिए जस्तो कत्तिको जनताले घरघरमै सेवा सुविधा पाए ? जनभावना सम्बोधन भए ? विकासको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका जनतालाई स्थानीय सरकारले केकति अनुभूत गरायो ? यी यावत् प्रश्न तेस्रिएका छन् ।
हाम्र स्थानीय सरकार जनताप्रति कतिसम्म उत्तरदायी छैनन् भन्ने एउटा सचेत नागरिक आवाजले बोलिरहेको छ । छाडा पशु चौपायाले भैरहवा क्षेत्रमा दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको छ । नगरसँग चौपाया व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना छैन । सहरको मुख्य सडकदेखि चोक र गल्लीगल्लीसम्म पशु चौपाया छपक्कै छन् ।
सिद्धार्थनगर आफैमा पर्यटकीय नगर हो । स्थानीय सरकारले पनि पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने भन्दै संरचनाहरु बनाइरहेको छ । यही नगर हुँदै कोरोना महामारी अघि बर्सेनि लाखौं भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटक लुम्बिनी लगायतका गन्तव्यमा पुग्छन् । पर्यटकीय नगरमा छाडा चौपायाको दुर्दशा हुँदासमेत स्थानीय सरकार रमिते छ ।
कानुनले छाडा पशु र चौपाया व्यवस्थित गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । नेपालको संविधानको स्थानीय सरकार संचालन ऐनको परिच्छेद–३ अन्तर्गत दफा–११ को उपदफा २ मा छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण गर्ने अधिकार सुनिश्चत गरेको छ ।
‘तर, संविधानले दिएको अधिकारसमेत देख्दैन सरकार । हामी जनता सधै निरीह छौं । हाम्रा आवाज सुनिँदैन’, भैरहवा मर्निङवाक गु्रपका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘म बोलिरहन्छु, नागरिकका समस्या उठाइरहन्छु, जबसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’
श्रेष्ठलाई राजनीतिक भोकतिर्खा छैन, न त पूर्वाग्रह नै । उनी भ्रष्टाचार विरोधी र जनसवालका पक्षमा खरो उत्रिन्छन् । उनैको नेतृत्वमा खुलेको मर्निङवाक गु्रपले नागरिक आवाज पटकपटक बोल्दै आएको छ । कयौं समस्या समस्या समाधान पनि भएका छन् । पाकापुस्ता र बुद्धिजीविहरुको संस्था भएकाले धेरै यो गु्रपलाई विश्वास गर्छन्, भरोसा गर्छन् ।
छपक्कै सडक नै ढाकेर छाडा चौपाया हिँडडुल गर्छन् । जथाभावी दिसा पिसाव गर्छन् । यसले सडक र सहरको सौन्दर्यता नासिँदै गएको छ । अर्कातर्फ दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै छ । कयौंले त छाडा चौपायाकै कारण ज्यान गुमाए, कयौं अंगभंग भए । नगरका सबैजसो वडामा चौपायाले सडक छेक्ने गरेका छन् । सडकसँगै चौपायाले पैदल यात्रु हिँड्ने फुटपाथसमेत रोक्ने गरेका छन् ।
नगरपालिका भने नगरभित्र गौशाला बनाउन सार्वजनिक जमिन नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले भन्छन्, ‘हामीसँग गौशला बनाउने जमिन छैन । नजिकका स्थानीय तहमा रहेका गौशला भरिभराउ हुँदा हामीले लगेका गाईगोरु राख्दैनन् । यसले गर्दा समस्या भएको छ ।’ उनले नगरले दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको बताउँदै कसैले आलोचना गर्दैमा तुरुन्त समाधान हुने विषय नभएको बताए ।
सिद्धार्थनगरमा मात्रै होइन्, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला छाडा चौपायाको समस्या छ । रुपन्देहीका लुम्बिनी, तिलोत्तमा, सैनामैना, बुटवल, देवदह, धकधईमा छाडा गाईगोरुको समस्या बढी छ । यस्तै, छिमेकी जिल्ला नवलपरासी र कपिलपवस्तुका स्थानीय सरकारले पनि छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । कपिलवस्तुका मूख्य सडक छाडा चौपायाले ढपक्कै ढाक्ने गरेको तौलिहवाका स्थानीय रामप्रकाश चौधरीले बताए । ‘धेरैपटक स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न भन्यौं तर सुनेन’, उनले भने, ‘जसले गर्दा सवारीलाई गति तय गर्न समस्या छ । दुर्घटना बढेका छन् । सडक फोहोर भएका छन् ।’ प्रहरीले पनि चौपायाकै कारण कयौं दुर्घटना भएको बताउने गरेको छ ।